खर्च नभएको बजेट के गर्दैछ अर्थ मन्त्रालयले ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
खर्च नभएको बजेट के गर्दैछ अर्थ मन्त्रालयले ?
२०७५ वैशाख १७ सोमवार
काठमाडाै, १७ वैशाख । चालु आर्थिक बर्ष (आब) मा जुन प्रयोजनको लागि सरकारले बजेट छुट्याएको हो, उक्त प्रयोजनमा खर्च हुन नसकको बजेट रकमान्तर हुने भएको छ। विभिन्न आयोजनाको लागि विनियोजन गरेको बजेट सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको पछि त्यसलाई रकमान्तर गर्न लागिएको हो।
चालू आबमा छुट्याइएको बजेट केही आयोजनामा खर्च नै हुन नसकेकोले त्यसलाई रकमान्तर गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले जानाकारी दिए। अहिले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको विषयमा तीब्र छलफल गरिरहेको उनले बताए।
‘केही शीर्षकमा बजेट अभाव भएको छ भने केही शीर्षकमा खर्च हुन सकेको छैन, त्यसमा हामी अहिले अध्ययनको क्रममा छौं’ कार्कीले भने। कुन शीर्षकको बजेट कुन शिर्षकमा लाने भन्ने अध्ययन मन्त्रालयमा भइरहेको उनले बताए।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ८ मा विनियोजना ऐनमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकमा बजेट बचत हुने भएमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले रकम रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा छुट्याइएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विनियोजित रकम धेरै खर्च हुन सकेको छैन, मन्त्रालय त्यो रकम समेत रकमान्तर गर्ने योजनामा छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये पोखरा र निजगढ विमानस्थलकाका लागि कूल ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रकम भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय अयोजनामा खर्च भएको छ। उक्त आयोजनालाई चालू आबको बजेटमा ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर फागुन मसान्तसम्ममा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
मेलम्ची खानेपानीमा चालू आबमा विनियोजन गरेको रकममध्ये १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यसको लागि सरकारले ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाले आफ्नो बजेटमध्ये २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले कोषलाई चालू आबमा ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ९ करोढ ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका लागि विनियोजित ७१ करोड ९७ लाखमध्ये फागुन मसान्त सम्ममा ४३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण आयोजनामा १ अर्ब ९१ करोड ८८ लाख मध्ये ५९ करोड १२ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
मध्यपहाडी राजमार्गलाई सरकारले चालु आवमा विनियोजन गरेको रकम मध्ये ९० प्रतिशत खर्च भएको छ। सो राजमार्गका लागि सरकारले ४ अर्ब २ करोड ८४ लाख रुपैंया विनियोजन गरेको थियो। काठमाडौं(तराई मधेस फाष्ट ट्रयाकमा पनि न्यून खर्च भएको देखिएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्व १४ करोड ४९ लाख मध्ये ३८ करोड १५ लाख मात्रै खर्च भएको देखिएको हो।
कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली उत्तर दक्षिण राजमार्गको लागि सरकारले विनियोजन गरेको दुई अर्ब २ करोड ४९ लाखमध्ये एक अर्ब २९ करोड ६६ लाख रुपैंया खर्च भएको छ। हुलाकी राजमार्गमा ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। रेल विकास आयोजनामा ४ अर्ब १ करोड ७० लाख मध्ये १ अर्ब ७८करोड ८२ लाख रुपैंयाँ खर्च भएको छ।
बजेट रकमान्तर गर्दा रकमको हिनामिना समेत हुन सक्ने आशंका गरिन्छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बजेट रकमान्तर गर्दा १० प्रतिशत भन्दा बढि गर्न नपाउने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा कतिपय शीर्षकमा २१ गुणासम्म बजेट रकमान्तर गरेको देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरलाई अनुकूल बनाउन अनुदान संख्या ५०१ (वित्तीय व्यवस्था) देखि ६०२ (अर्थ विविध) मा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तर गर्न उक्त हद नलाग्ने व्याख्या गरेर बजेट जथाभावी रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।